I-Stalemate njengoba-Spurs ibambe i-Chelsea | Scrolla Izindaba
I-Stalemate njengoba-Spurs ibambe i-Chelsea
I-Chelsea ilahlekelwe yithuba layo lokuya esicongweni seligi ye-English Premiership ngokudlala ngokulingana ngeqanda eqandeni ekhaya ne-Tottenham Hotspurs ngeSonto e-Stamford Bridge.
I-Spurs ihlale phezulu ku-log kwathi i-Chelsea yahlala endaweni yesibili ngemuva kokutholana phezulu.
I-Chelsea ikhombise izinhloso zayo zokuwunqoba lo mdlalo zisuka nje, kodwa isiteleka somdlali wasesiswini wase-Algeria uHakim Ziyech sishaywe kalula nguHugo Lloris kungakapheli nemizuzu emibili.
Ikhefu elisheshayo le-Blues, eliholwa nguMason Mount liphele lapho uTimo Werner egoqa unozinti we-Spurs uHugo Lloris ukuthola inethi kodwa umsizi kanompempe uphakamise ifulegi wathi yi-offside.
Ukuhlasela kukaSerge Aurier okuvela onqenqemeni lwebhola le-Chelsea bekubonakala kwenzelwe ikhona elingezansi kodwa uEduard Mendy ubelingana nalo msebenzi wehla ngokushesha ukuyovimba ngokumangalisayo.
I-Chelsea iqhubeke nokuhlola kepha uLloris ubhuntshise wonke amathuba adalwe yi-Blues futhi wagcina izinga lamaphuzu lingena esikhaleni.
Esiwombeni sesibili, i-Chelsea ibuye futhi izofuna igoli kodwa ukuqeda okungafanele kwayehlisela phansi. UTammy Abraham noZiyech yibona abenze iphutha elikhulu, belahlekelwa amathuba alula.
Umphathi we-Spurs uJose Mourinho uthe akajabule ngemiphumela elinganayo kodwa izinhlangothi zombili ziyahloniphana. “Esigabeni sokugcina somdlalo bekungenzeka nganoma ngabe iyiphi indlela,” uyasho.
Khonamanjalo, uEdinson Cavani ugqugquzele i-Manchester United ekulweni okuvusa amagoli amabili wehlise umdlalo oncomekayo wamagoli amathathu kwamabili ibhekene ne-Southampton enkundleni yezemidlalo i-St Mary’s.